Bhandi reApple Tarisa Nomad Rugged Strap | Ndinobva mac
Nomad matsva eApple Watch tambo anowedzera maviri matsva zvinhu: dehwe uye FKM Fluoroelastomer. Mune ino kesi isu takakwanisa kuyedza iyo tambo nyowani yeApple Watch Nomad Rugged Strap, tambo yakasimba uye inopokana.
Kana isu tichitaura nezvaNomad hatingarambe kuti mhando yechigadzirwa chichava chakanyanya uye mune ino kesi bharanzi pacharo, hoko kune wachi kana iyo mbiri clasp yekuwedzeredza kwetambo inoratidza kuzvipira kwekambani huru iyi kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
1 Iyo FKM Fluoroelastomer mune iyi tambo haisi silicone
2 Maviri apedza: nhema uye sirivheri
3 Yakakwenenzvera Strap Mutengo
Iyo FKM Fluoroelastomer mune iyi tambo haisi silicone
Mumwe wemibvunzo yakatitambudza yaive yekuti zvinhu zvakashandiswa pamabhande matsva eNomad aya zvaizofanana neApple uye hongu, tinofanirwa kutaura kuti chinhu chinoshamisira chisina kufanana nepurasitiki kana silicone yemabhande akajairwa. Iyi Rugged Strap ine chinoshamisa chekubata uye inopesana nemhando dzese dzemamiriro sekutsanangurwa kwazvo pane webhusaiti yaNomad. Tinogona kutaura kudaro Izvo hazvina chekuita neyakajairika silicone tambo yatinowanzo tenga, iyi mhando yepamusoro tambo.
Nomad anotarisira iyo ruzivo kune iyo yepamusoro uye mune ino tambo nyowani inowedzera pini yakapetwa kuitira kuti iyo yakasungirirwa tambo isasununguke uye inogona kuvhurwa. Kuvhara kwacho kwakakora uye kwakachengeteka kana tambova netambo, yakakura saka haina kukodzera kune avo vashandisi vari kutsvaga tambo yakatetepa.
Maviri apedza: nhema uye sirivheri
Kune vashandisi vane Apple Watch mune sirivheri, vane iyo vhezheni ine hoko kune wachi mune imwechete yekupedzisa uye kuvhara buckle. Nezve dhizaini dhizaini zvakangofanana mune ese mamodheru saka mupfungwa iyi hapana shanduko.
Rugged Straps inowanika kune ese 38/40 mm uye 42/44 mm Apple Watch. Mune ino kesi, chiyero chakasarudzwa chiri 44mm uye chinotaridzika chaizvo chakanaka kana tichinacho munzvimbo. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti haisi tambo yakatetepa, asi zviri kune avo vanofarira vanoda tambo isingagadzirisike nezvinhu uye yakasimba.
Yakakwenenzvera Strap Mutengo
Mune ino kesi mutengo weiyo itsva Nomad tambo ndeye $ 49,95 kune iyo inofanirwa kuwedzerwa mutengo wekutumira kunyika yedu. Chero zvazvingaitika, mawebhusaiti akadai seMacnificos ane basa rekuunza zvigadzirwa zveNomad kunyika yedu uye nekuzvitengesa, unogona kushanyira webhusaiti yavo kana kutenga zvakananga kubva kuna Nomad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Bhandi reApple Tarisa Nomad Yakasungwa Bhandi